Jowhar oo Miino Baaris ka Socota iyo Ciidanka AMISOM oo ka Qeyb Qaadanaya
Home Somali News East Africa Jowhar oo Miino Baaris ka Socota iyo Ciidanka AMISOM oo ka Qeyb...
Wararka ka imaanaya Magaalada Jowhar ee xarunta Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayan in halkaasi ay ka socdaan howlgalo miino baaris ah oo ay wadaan ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Dhamaan xaafadaha kala duwan ee Magaalada Jowhar ayaa wararku sheegayaan inay ka socdaan howlgalada miino baarista ah oo ay wadaan ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Sida uu warbaahinta usheegay Afhayeenka Gobalka Shabeelaha Dhexe Daa’uud Xaaji Ciiro howgalka ayaa wuxuu yahay mid dhamaan ka socda afarta xaafadood ee Degada Jowhar halkaasi oo ay ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay wadaan howlgalka.
Wuxuu sheegay in meelaha aadka loo baaray ay kamid tahay xarumaha Dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale guriga Degmada Maxamed Dheere uu daganaan jiray Degmadaasi.
Sidoo kale Meelaha maanta sida aadka ah loo baaray ayaa waxaa kamid ah Saldhiga Degmada Jowhar iyo laamaha kale ee Degmada Jowhar.
Qarax ayuu sheegay afhayeenka maamulka Gobalka Shabeelaha Dhexe inuu ka dhacay Degmada kaasi oo aan geysan wax khasaaro ah sida uu tilmaamay islamarkaana ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay wadaan howlgalka.
Degmada Jowhar ee xarunta Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa iminka gacanta ku haya ciidamada Dowladd Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.